Sajhasabal.com |एमाले-माओवादी ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने, भागबण्डामा कसलाई कति ?
एमाले-माओवादी ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने, भागबण्डामा कसलाई कति ?
जेठ २, काठमाडौं । एमाले-माओवादी एकता पछि ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने भएको छ । जसमा भागबण्डामा एमालेले बहुमत सदस्य २४१ राखेको छ भने माओवादीले २०० सदस्य पाउने भएको छ ।
त्यस्तै ४३ सदस्यीय स्थायी कमिटी रहने भएको छ जसमा एमालेबाट २५ जना रहनेछन भने माओवादीबाट १८ जना रहने छन् । त्यस्तै बिहीबार नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने तयारी पनि छ । दुई पार्टीको सहमति अनुसार चुनाव चिहृन सूर्य नै रहने भएको छ ।
भोली मदन भण्डारी स्मृतिको एमालेले गर्ने कार्यक्रममा माओवादी शीर्ष नेताहरुलाई बोलाइएको र दिउँसो पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने भएको छ । साँझ ५ बजे पत्रकारसम्मेलन गरेर पार्टी एकताको घोषणा गर्ने तयारी भएको माओवादी उच्च स्रोतले बताएको छ । सम्भव भए भोलि नै एकीकृत पार्टी ‘नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको छ ।